Sawiro Shirki Elif-Maay (Somali-Maay Conference) Oo ka furmay magaalada Boras ee wadanka Sweden.
28 July, 2018 in by
Kulankan oo ah mid looga hadlayo horumarinta luuqadda iyo dhaqanka dadka ku hadla afka Maay, ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyadda Soomaalida Sweden iyo Hayadda CPBI oo ah hayad u ololoaysa dhismaha nabadda.
Waxaa kulanka goobjoog ka ah aqoonyahanno dhanka luuqadda ah iyo waxgarad ka kala socda wadamada aduunka.
Waxaad si toos ah shirka uga daawan kartaan bogga CPBI (Center for peace buiding initiative).
Shirko dardar ku socda madaxda European Union-na ay fadhido wararkiiso tifaftiran waxaad kala socon doontaan si toos ah dhamaan qaybaha kala duwan warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya amar Alle laakiin¦¦